English to Burmese - Rates: 0.05 - 0.06 USD per word / 48 - 54 USD per hour
Burmese to English - Rates: 0.04 - 0.06 USD per word / 48 - 54 USD per hour
English to Burmese: School Suspension Form
School Suspension Form
Your child,	, has been suspended from school for days. That means he/she hadaserious problem at school.
Your child may not return to school until . A parent or guardian must return to school with the student on this day to meet with teachers and administrators. Please call	__________________at if you have any questions.
သင်ကလေး,	, သည် နေ့ရက်မှ နေ့ရက်ထိ ကျောင်းမှ အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရပါသည်။ ဤအဓိပ္ပါယ်မှာသူ/သူမသည် ကျောင်းတွင်း ပြဿနာဖြစ်မှူ့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ကလေးသည် ကျောင်းသို့ ဤနေ့ရက်ထိကျောင်းသို့ပြန်လာပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ကျောင်းသားသည် ကျောင်းသို့ပြန်လာသည် နေ့တွက် မိဘ အုပ်ထိန်းသူနှင့်အတူ ကျောင်းသို့လာပြီးဆရာ/ဆရာမ (သို့မဟုတ်) ကျောင်းတွင်း တာဝန်ရှိသူနှင့်လာရောက်တွေဆုံ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်း မေး စရာများရှိခဲ့လျှင် ဖုံးနံပတ် _________________ သို့ဖုံးဆက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Translation education Bachelor's degree - Rangoon University in Burma